Aqoonkaab CALAAMADO KUU CADAYNAAYA IN CAAFIMAADKI JIDHKAGU HOOS UDHACAY. | Aqoonkaab
CALAAMADO KUU CADAYNAAYA IN CAAFIMAADKI JIDHKAGU HOOS UDHACAY.
Jul 12, 2015Caafimaadka
1.Timaha oo cirooba ka hor 40 jirka.cirowga timuhu waa arin dabiiciya oo badanaa hido ah.haday timahaaga 50% ciroobaan adoo aan wali gaadhin 40 jir.waxaa macquula in ay ku hayso macaan.iska baadh oo hubi inaad leedahay macaan.
2.Boogo yaryar oo ka midab badalan jidhka.waxay ku bilaabman kuwo aan wax dhiba lahayn .lkn qaarkamidi waxay isu badalaan khatar ku so wajahan noloshaada.gaarahaan kuwa so ifbaxa markaad qoraxda u baxdo .dhakhaatirtu waxay badana shegeen inay tahay calaamad Cencerka maqaarka.
3.midabka isha oo isbadala cadaan kiina ka taga .ishaadu waa inay badanaa cadaato .hadi midabkeedu isbadalo sida inuu noqdo huruud cadaan xigta waxay sheegaysaa cudurkay somalidu utaqaan jooniska .ama xamaytida oo bukta.casaanka cadaanka xigaa wuxu muujinayaa calaamad dhiikarka ama xanuunada virusku keeno .sida indha cuncunka.
4.Dibnaha oo qalala .tani waxay qusaysaa heerkulka oo is badalay iyo dabaylo.haday dibintaada o qarqaraxdaa waxaa si cad kaaga maqan Vitamin B iyo Curiyaha zink
Previous Post4 qodob oo aad taajir ku noqon kartid Next Post5 CAASIMADOOD E DUNIDA UGU QURUXOON .IYO WADAMADOODA,